Ny zokiolona no mampita amin'ny tanora ny hambom-po hikaroka ny dikan'ny fiainana sy ny finoana. Fahasoavana izany ka mendrika fisaorana an'Andriamanitra, hoy ny Papa François. Arahantsika ny tohin'ny Katesiziny momba ny antson'Andriamanitra ho an'ny zokiolona miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa.
Fianakaviana: Fanomezana ny vavaky ny zokiolona
Manohy fampianarany momba an'i Simeona sy Anna ny Papa François., izay maneho amintsika ny haren'ny fahanterana. Nahazo hery vaovao izy ireo teo am-pihaonana tamin'ny Tompo. Fanazavana miaraka amin'i P. Justolat Rafaralahimboa
Ny fiaraha-monina na ny fianakaviana no manao antsika an-jorom-bala na manilikilika antsika zokiolona, hoy ny Papa François, nefa ny Tompo tsy manary antsika na oviana na oviana. Tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny anjara toeran'ny zokiolona, miaraka amin'i P. Justolat Rafaralahimboa: